Twitter: Autofollow miorina amin'ny Toerana | Martech Zone
Alahady, Desambra 29, 2013 Alahady, Desambra 29, 2013 Douglas Karr
Amin'ny maha-daholobe sy mpampita hafatra, dia afaka manararaotra ny orinasa Twitter hampitombo ny fifamoivoizan'ny mpivarotra eo an-toerana - mora kokoa noho ny eritreritry ny maro. Ireo mpisera Twitter dia samy mavitrika ary be vava momba ny toerana misy azy ireo sy ny zavatra ataony. Amin'ny fanarahana ireo mpampiasa Twitter mavitrika amin'ny faritra, ireo orinasa miankina amin'ny orinasa eo an-toerana dia afaka mampitombo ny fifamoivoizana mivantana ary manamafy ny marika an-tserasera.
Realtors, magazay eo an-toerana, trano fisotroana, klioba, mpiasan'ny fiantohana… na orinasa hafa izay mitondra orinasa mifototra amin'ny toerana ara-jeografika dia afaka mandray soa avy amin'ny fanarahana sy fampivelarana fifandraisana amin'ireo mpampiasa Twitter manodidina ny orinasany. Tombontsoa iray fanampiny ny hoe mizara sary, horonan-tsary ary fanavaozam-baovao matetika ireto olona ireto - tsy amin'ny Twitter ihany, fa hatrany amin'ireo tambajotra sosialy sy fampiharana hafa.
Tweet Adder hahita mpampiasa twitter amin'ny toerana misy azy ao anatin'ny 10 kilaometatra, 25 kilaometatra, 50 kilaometatra, na 100 kilaometatra amin'ny kaody zip rehetra, manafatra, manaraka izao ny send auto. Hitan'i Tweet Adder hatramin'ny 56% hanaraka anao hiverina - manome ny fotoana ahafahan'izy ireo manomboka ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Ary koa, afaka manomboka mamaly izy ireo ary mamerina mandefa ny vaovao farany aza!
Fampahafantarana: rohy mpiara-miasa izany!
Tags: autofollowlavitrageolocationrayonmpandefa bitsikatweetadderTwitteranaty elanelana